June 22, 2020 - PARIJATMEDIA
“ने’पाललाई सहयोग गर्न,चिनियाँ हवाई सेना नेपाल आ’उँदै”
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न नेपाललाई अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सहयोग गरेको देश चीनबाट जनमुक्ति सेनाको विमान सहायता सामान बोकेर बुधवार काठमाण्डू ओर्लिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनालाई चीनले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथ चीनको वायुसेनाको एउटा विमान नेपाल आउने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले भने, “नेपाली सेनालाई सहायतास्वरूप दिने स्वास्थ्य सामग्री लिएर चिनियाँ वायुसेनाको ठूलो विमान काठमाण्डू आउँदैछ।” नेपाली सेनाले त्यसबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको विमान स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लिएर काठमाण्डू आउन लागेको हो। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पीपीईजस्ता सुरक्षा सामग्री रहेको बताइएको छ।
विवाहित व्यक्तिलाई गर्लफ्रेण्डसँग प्रेमालाप गर्दै, इक्वेडरका देवेइ एन्ड्रेड नामका ती व्यक्तिले स्टेडियममा बसेर बार्सिलोना र डेलफिनको फुटबल खेल हेरिरहेका थिए । उनकी गर्लफ्रेण्ड उनको छेउमै थिइन् । संसारलाई बिर्सेर बसेका ती व्यक्तिले खेल हेर्ने क्रममा गर्लफ्रेण्डलाई कि’स गरिरहेका थिए । ती व्यक्तिलाई रत्तिभर पत्तो थिएन कि खेल लाइभ कभर गरिरहेका क्यामेराले उनको यो ह’र्कत पनि कभर गरिरहेका थिए । उनीहरुको हर्क’त स्टेडियममा जडित ठूला क्रिनसँसै टिभीमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको थियो । जब देवेइलाई महसुस भयो कि उनको भिडियो लाइभ भइरहेको छ, उनी सचेत भए । त्यतिबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । उनकी श्रीमतीले घरमा बसेर टिभीमा यही खेल हेरिरहेकी थिइन् जसले देवेइको चर्तिकला पनि देखिसकेकी थिइन् । देवेइको ह’र्कत देखेपछि उनकी श्रीमती घर छा’डेर गइन् । विश्वभर भिडियो भाइरल भएपछि र श्रीमती घर छा’डेर गएपछि
श्रृंखला र सिसन’को असा’रे मस्ती [फोटोफिचर]
पुर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडालाई असार महिना भव्य रुपमा लागेको छ । उनी भ्लगर शिसन बानियाँको साथमा किर्तिपुरमा धान रोप्दै देखिएकी छन् ।सार्वजनिक रुपमा यी जोडीले आफ्नो प्रेम स्वीकारेका छैनन । तरपनि श्रृंखला र शिशन अधिकांश समय सँगै देखिन्छन् सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिर अनुसार उनीहरु असारे महिनामा धान रोप्दै हिलो खेलिरहेका छन् । बिगत एक वर्षदेखि श्रृंखला र शिशन प्रेम सम्बन्धमा रहेका कुराहरु मिडियामा आइहरेका छन् । तर सार्वजनिक रुपमा यी जोडीले आफ्नो प्रेम स्वीकारेका छैनन । तरपनि श्रृंखला र शिशन अधिकांश समय सँगै देखिने गरेका छन् । श्रृंखलाले शिसनको प्रसंसा गर्दै तस्बिर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने गरेकी छन् । केही दिन हप्ता अगाडी मात्र श्रृंखलनाले शिसनको कपाल काट्दै गरेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो । तस्बिर हेरौं
तपाइँ हामीले सपना देखिरहेका नै हुन्छौँ । तर सपना देखिएका कुराहरुका अर्थ के हो भन्ने बारेमा जानेका हुँदैनौँ ।आज हामी तपाइँलाई सपनामा पानी देख्दा शुभ कि अशुभ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछौँ । सपनामा नदी देख्नु यदि तपाइँले सपनामा नदी देख्नु भयो भने तपाइँका अधुरा सपना पुरा हुँदैछन् भन्ने बुझ्नु सकिन्छ। सपनामा बाढी आएको देख्नु यदि सपनामा बाढी आएको बेलाको पानी देख्नुभयो भने सावधान हुनुपर्छ । किनभने त्यसको मतलव छिटै नै तपाईको जीवनमा नराम्रो अवस्था आउने संकेतका रुपमा फलादेश गरिन्छ ।एजेन्सीको सहयोगमा यो पनि फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालका कारण यसरी आउदै छ सम्बधमा फाटो !! श्रीमान् र श्रीमती घरभित्र भएर पनि बोलचाल हुँदैन किन ? एउटै शयन कक्षमा भएर पनि आपसमा भलाकुसारी हुँदैन किन ? एउटै ओछ्यानमा भएर पनि अन्तरङ्ग क्षण साटिरहेका हुँदैनन् किन ? किनभने उनीहरूबीचमा अहिले घुस्रिएको छ, साम
समाजमा अझै पनि शास्त्रीय मान्यतालाई साँचो मान्ने गरिएको छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शा’रीरिक अं’गको ब’नावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे थाहा पाउन सकिने कुराको वर्णन गरिएको पाइन्छ । यसैको आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्य बारे थाहा पाउन सकिने धार्मिक मान्यता रहेको छ । शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण हुने ब्यक्ति सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र राम्रो फल प्राप्त गर्छन् । सो उक्त पुराणमा भाग्यमानी कन्यामा हुने बाह्र गुणबारे उल्लेख गएिको छ । उक्त गुण भएका युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष पनि धेरै भाग्यमानी हुने कुराको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । १ अनुहार उज्यालो , गोरो र चिल्लो भएका युवतीहरु धेरै भाग्यमानी हुने विश्वास गरिन्छ । २ आँखाका आँखीभौं जोडिएका युवतीलाई विश्वास गर्न
रसुवा ।उत्तरमा छिमेकी देश चीनसँग जोडिएको जिल्ला भएर पनि रसुवा हालसम्म को’रोनामुक्त छ । चीनको वुहान शहरमा कोरोना फैलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुरुमै सीमा नाका रसुवागढी ब’न्द गरेको थियो । चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान शहरमा उक्त रोगको संक्रमण फैलिन थालेलगत्तै नेपालको उत्तरी नाका रसुवाबाट आवतजावतमा रो’क, रसुवागढी तथा बेत्रावतीमा हेल्थ डेस्क स्थापना, रो’गको अ’सरसम्बन्धी व्यापक ज’नचेतना, स्थानीय बासिन्दाद्वारा लकडाउनको पूर्ण पा’लना जस्ता कार्यले हालसम्म कोरोना रो’ग नियन्त्रण गर्न सफलता मिलेको जनस्वास्थ्य प्रमुख किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्ला बाहिर र विदेशबाट आएका स्थानीय नागरिकलाई पहिलो चरणमै क्वारेन्टिनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यवस्तु बोकेर जिल्ला प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा की’टाणुनाशक औ’षधि छ’र्कने जस्ता कामले रसुवा कोरोनाबाट सुरक्षित रह
श्री पाथीभरा माईले सबै’को कल्या’ण गरुन। असार ८ गते देखि १४ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोला।
मेषः– २५ गते सम्म समय'ले साथ दिनेछ । काम गर्न गाह्रो हुने'छ तर परिणामले सन्तुष्टि दिनेछ । मुद्धा मामिलाम जीत हुनेछ । जीवन साथिको महत्वपूर्ण सहयोगले मनमा हौसला बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । विदेश यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । आयात निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार र शनिबार भने समयले त्यति साथ दिने छैन । अन्तिम चरणमा पुगेका काम पनि रोकिन सक्छन् । विभिन्न खालका झन्झट आईलाग्नेछ । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । उपलब्धिका सम्भावना क्षीण हुनेछन् । वृषः– मंगलबार सम्म समय त्यति अनुकुल देखिन्न । अनेका खालका विवाद उत्पन्न हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट उचित प्रतिफल मिल्ने छैन । राज्यसँग सम्बन्धित काममा विलम्ब हुनेछ । बुधवारबाट समयमा क्रमिक सुधार आउनेछ । संघर्षबाट सफलताका सिढि चढ्न पाईनेछ । सफलता असफलता आफ्नै हातमा रहनेछ । रोकिएका का
काठमाडौं ०८ असार / नेपालमा आज एकै दिन थप ३७० जना कोरोना लाई जितेर घर फर्किएका छन । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिने नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रबक्ता प्रा. डा जागेश्वर गौतमले पछिलो २४ घन्टामा मा ३७० जना निको भएर घर फर्किएको पुष्टि गरेका छन । रामेछाप अस्पतालबाट कोरोना जितेर घर फर्कदै १३ जना नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५३५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ हजार ५ सय ६१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म ९ हजार ५ सय ६१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या ९ हजार ५ सय ६१ पुगेको जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भइ अस्प
हेटौंडाकी २२ वर्षीया सुस्मिता थापाको ह,त्या नै भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २ असारमा थापाको भान्सा कोठामा मृ,तावस्थामा शव फेला परेसँगै यो घटना रहस्यमय बन्दै आएको छ ।घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको ह,त्या नै हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सुशील सिंह राठौरले बताए ।एसपी राठौरका अनुसार थापाको श,व भान्छामा वि,भत्स अवस्थामा भेटिनुले ह,त्या भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार थापाको तड्पा,इ–तड्पा,इ ह,त्या गरिएको हुनसक्छ ।मृ,तक थापाको टाउकोमा ग,म्भीर चो,ट, आँखा फुटा,इएको र घाँटी, हातमा नि,लोडाम देखिएको घट,नास्थल पुगेका प्रहरीहरुले बताएका छन् । कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका ८,बोडगाउँकी २६ वर्षिय सुस्मिता भारतको दिल्लीमा बिएचएम पढ्दै थिइन् । घरकी एक्ली छोरी सुस्मिताको अध्ययनकै क्